Goredzva 2017 Facebook Status Goredzva 2017 Facebook Status
Goredzva 2017 Facebook Status
Happy itsva gore Facebook Status tiri pano uye tine zvipo agadzirira iwe.
Tariro Yokunyemwerera kubva pachikumbaridzo kwegore kuuya, Kuzevezerana 'zvichava kufara' - Alfred TENNYSON
"Resolution Gore Idzva: Kuti mapenzi bvumira zvakawanda nomufaro, akapa ichi haasi kuvakurudzira kuti atore zvimwe nguva yangu. - James agati
Goredzva rakanaka 2017 Facebook Status
"Vaya wakakupa muviri, yakatorongedzwa nayo utera; asi iye wakakupai Soul, dzokurwa newe chisarudzo. anoshandisa nayo, uye iwe wakachenjera; vakachenjera uye iwe kufara. - Akhenaton
"A gore idzva kunounza mufaro kwete chete, zvinoita kuti tifare pamwe chete netariro kuzadzikisa dreamz redu kana hutsva kutanga upenyu hwedu. saka, gore idzva iri rinokosha chaizvo kuna vose. - Santonu Kumar Dhar
"Iri ndiro gore idzva. A mavambo matsva. Uye zvinhu zvichachinja - Taylor
May moKutonga New Year 2017 Anodzivisa mwoyo wako tariro uye anounza kupenya mangwana pamwe mijenya pamusoro potentials itsva. goredzva rakanaka….
My zvakanakisisa kushuvira iwe,
kutanga zvikuru Jan, Tide Feb,
rugare March, No kunetseka nokuti April,
mafaro nokuti May, Mufaro June kuna Nov,
Ivai raki uye anoshamisa 2017
Ngatikurukurei kanganwa kutya kwedu, regai kurota kwedu zvose pachena, ngativei zvikuru upenyu, ngativei nehanya nevanhu vakatipoteredza gore rino. A Year Idzva kuuya glows tariro mupfungwa dzedu. It inotizadza chivimbo itsva uye ushingi kutanga patsva. Gore rino ngatifungisisei zvivi zvedu uye edza zvatinogona kuti zvakanaka.
Sezvo Year New anotarazve mavambo matsva, ngatinzwei vanhu vakanaka, ngativei zvakawanda adventures uye ngatiite mijenya ndiyeuke gore rino. Sezvo Year New ari makadhi isu vava Advance Happy New Year Images nekuti vadikani neshamwari.
My Dear musikana,
Ndinoda Kiss You
Saka ini dundundu isingaverengeki Remake To 2016 &
Zvirumbidzei An Amazing Start For The New Year 2017.
Sezvo gore idzva paanotangazve zvose mufaro uye akanaka, tariro romufaro mweya anochengeta anopenya mumwoyo yenyu nokusingaperi!
Ι haungatongogoni fοrget enyu asvinure Αrms, Υour makagadzirira-to-teerera Εars, moyo Υour mhando Αnd yenyu nehanya lοve nokuda Μe! Achida yοu inodziya kumbundirwa Αnd mijenya pamusoro lοve kuNew Υear!
Little makiyi pachena makuru dzevhudzi;
Simple mashoko anoratidza pfungwa huru;
Kunyemwerera kwako vanogona kurapa mwoyo kutigumbura;
Saka ramba kunyemwerera, naro the rocks.
Goredzva rakanaka 2017!